China Children's Face Bandanas Transparent Shield Cartoon ကာတွန်းပုံနှိပ်ခြင်းပေါ့ပါးသောမျက်နှာစောင့်တပ်ထားခြင်းဖြင့်အဝတ်လျှော်နိုင်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အကာအကွယ် ဦး ထုပ်နှင့်ကလေးသူငယ်များထုတ်လုပ်သောစက်ရုံများအတွက်စက်ရုံများအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Baolai
Children's Face Bandanas Transparent Shield Cartoon ကာတွန်းပုံနှိပ်ခြင်းပေါ့ပါးသောမျက်နှာစောင့်တပ်ထားခြင်းဖြင့်အဝတ်လျှော်နိုင်သောလုံခြုံမှုကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အကာအကွယ် ဦး ထုပ်နှင့်ကလေးငယ်များအတွက်ရှင်းလင်းသောကျယ်ပြန့်သော Visor ပါရှိသည်။
1.Kids face shield - ကလေးခေါင်းခေါင်းပတ် ၀ န်းကျင်အတွက် elastic headband ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဝတ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ယူရန်လွယ်ကူသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောအကာများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမြင်အာရုံကိုသေချာစေပြီးကလေးများအတွက်သင့်တော်သည်။
2.Comfort - သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် headband တစ်လျှောက်တွင်ရှူရှိုက်နိုင်သောပျော့ပျောင်းသော padding ။ ညှိနိုင်သော elastic ကြိုးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြည်လင်သောပလတ်စတစ်အဖုံးသည်ပြီးပြည့်စုံသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ အရွယ်အစားတစ်ခုသည်ကလေးများ၏ခေါင်းပုံစံနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ဒီနေရာမှာ Shield အမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိတယ်
4. ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု: သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါကအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Item NO ။ 1010
အရွယ်အစား 26 x ကို 22 စင်တီမီတာ
Pack ကို 10 pcs / opp အိတ်, 400 pcs / ctn
ပုံး၏အရွယ်အစား 52 x 52 x 52 စင်တီမီတာ
လက်မှတ် CE - FDA
1, ကျွန်ုပ်တို့သည် 50pcs ကျော် qty လျှင်သာဝါးမျက်မှန်အပေါ် LOGO လေဆာနိုင်ပါတယ်! ၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအား“ အရည်အသွေးအာမခံ” နှင့်“ အချိန်မှန်ပေးအပ်ခြင်းအာမခံ” ကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။ 3, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံခြုံစိတ်ချစွာရောင်းနိုင်သည့် CE, SGS-UV400, FDA လက်မှတ်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်!
ရှေ့သို့ ဘက်ပေါင်းစုံအကာအကွယ်ပေးသည့်အဖုံးသည်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော Visor တံတွေးထွေးခြင်းမှကာကွယ်သည့်မှန်ဘီလူး၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွက်ပေါ့ပါး။ ပွင့်လင်းသောအကွယ်အကာနှင့်အတူ
နောက်တစ်ခု: ကလေးများသည်မျက်မှန်တပ်။ မျက်နှာပွင့်လင်းမြင်သာသောမျက်နှာ Bandanas၊ Anti-Fog / Anti-Spray ဖြင့်မျက်နှာကြက်သည်
မျက်နှာ Shield ကိုမျက်မှန် Frame
Face Shield ပေးသူ
မျက်နှာ Visor Shield ကို
မျက်မှန် Face Shield
ကလေးများကာတွန်းပုံနှိပ်သည့် Anti-Fog Face Guard ...